Ubisi bokunciphisa: ukubuyekezwa kodokotela nemiphumela. I-Milkay: Ukubuyekezwa kulabo abalahlekelwa isisindo nemiphumela
Itii elimanzi liyigama elihle letiyiti yendabuko yesiNgisi ngokufaka ubisi. Ngaphezu kwalokho, abaningi bathi lesi siphuzo sisindisa isisindo esiningi. Abanye baze bahlale nokudla kwezinsuku ezintathu ngobisi. Uyazi ngokulimala kokudla okunjalo? Ake sikhanyise izakhiwo zangempela zobisi zokulahlekelwa isisindo.
Ubisi bokunciphisa - ukubuyekezwa kodokotela
Ngokwehlukana, itiye eluhlaza nobisi, ngokungangabazeki, uletha umzimba umzimba. Ithimba liqinisa izindonga zemithambo yegazi, iqhuma ubuthi, ithuthukise ukusebenza kwezinso, nobisi luwumthombo we-calcium, amafutha anempilo, i-lactose, amavithamini A no-E, amaprotheni. Kodwa uma lezi zingxenye zixutshwe, uketshezi oluthile lufana nobuhlungu kunokuphuza okunomsoco omuhle. Ake sibone.
Ama-lime amachiza ayenqatshelwe ama-antioxidants, okusho ukuthi angeke kube nombuzo wokuhlanza isibindi. Enye impahla eyingozi, ikakhulukazi ekudleni okwenziwe ubisi izinsuku ezingu-3 kunciphisa ithoni yezinsimbi zamathambo zenhliziyo nemithambo yegazi. Iqiniso lokuthi ubisi luqukethe amaprotheni - casein, okuvimbela izinto ze-catechins (flavonoids itiye), okuthinta kahle umsebenzi we-cardiovascular system. Lokhu kutholakala kwenziwa ngumsosayensi waseJalimane uVerena Strangle.
Ubisi luyi-calcium eqhubekayo, kanye netiyi - tannins, ezivimbela ukufaniswa kwe-calcium yesilwane ngomzimba. Phakathi naleso sikhathi, i-calcium ingene emgodleni wegazi, idinga ukuthathwa kwenye indawo, futhi umzimba awubonakali i-calcium ezinso, ukuqoqwa ngokweqile okuholela ku-urolithiasis.
Ucwaningo lwesayensi olwenziwe eMelika lubika ukuthi isiphuzo esishisayo esenziwe ngobisi kanye netiyi likhuphuka kakhulu izinga le-carcinogens egazini futhi linciphisa ukumelana komzimba ekwakheni izicubu.
Futhi ekugcineni, kungani ungasebenzisi ubisi ngezidlo ze-mono izinsuku ezingu-3, ​​izinsuku ezingu-7 nangaphezulu: isiphuzo sinomphumela oqinile we-diuretic kanye ne-laxative. Umzimba umane uchithe amanzi, ngakho isisindo sinciphisa. Akukho ukuhlukaniswa kwamafutha ngeke kube khona! Iziwula ezifuna indlela elula zichitha umzimba, zihlanza ama-micro- kanye nama-macronutrients. Amantombazane, ezemidlalo kuphela, ukudla okunomsoco kanye nokudla okunengqondo kuzokusiza ukunciphisa isisindo
Ukulayishwa usuku ngolwazi: zokupheka
Kodwa-ke, i-mono-diets yosuku olulodwa yobisi ingaba usizo ngenxa yezinto ezizwakalisa izidakamizwa nezilayilayo zalesi siphuzo. Umzimba uhoxisa uketshezi okweqile futhi uhlanza isisu somzimba. Labo abaye bazama lesi siphuzo esimangalisayo bakhuluma ngomzwelo wokugcwala usuku lonke - esinye isibonakaliso kanye nesibonakaliso siyabamba, njengokuphuza usuku lokuzila.
Kuvinjelwe ukulamba ngalesi siphuzo kaningi ngaphezu kwesisodwa ngo-10, futhi cishe izinsuku ezingu-14!
Iresiphi # 1
Half ilitha ubisi ukuletha emathumba, kancane kancane futhi uthele 3-4 tsp. itiye elihlaza. Bambelela amaminithi angu-20, vula. Phuza ngesikhathi senkomishi.
Iresiphi # 2
Ngokuba ingilazi ye 250 ml ithatha i-1 tsp. ubilise, uthele amanzi abilayo 1/3, ugcizelele amaminithi amathathu bese uphakamisa ubisi olubandayo / obushushu.
Iresiphi # 3
Ukufudumala izinkomishi kumbhangqwana noma kumayelana ne-microwave. Thepha 1/3 yobisi obandayo bese wengeza u-2/3 we-brew eqinile.
Iresiphi # 4
I-100 ml yamanzi - 1 tsp. welding. Sengeza 150 ml ubisi.
Imininingwane ebalulekile, itiye nobisi lidakwa ngaphandle kokushukela. Lokhu akuyona into enhle kakhulu engazijwayele, ngakho-ke ungangezela isigamu sezipuni ezinoju noma izinongo: isinamoni esiqongweni sommese, ama-clove. Emzimbeni awulahlekelwa yingozi yamanzi, qiniseka ukuphuza 1.5-2 amalitha amanzi ahlanzekile emini.
Khetha izinhlobo ezibizayo kuphela zetiyi, kukhona ukungcola okungcolile okuncane, ama-flavour kanye namabala okubala. Itizi ezithengiwe zizokwenza umonakalo we-ubisi oshayayo kakade.
Ukuphuza okunamandla kakhulu kubangelwa ukucabangela, ukucindezela ukuqhuma nokulahlekelwa ukwazi. Buka isimo sakho sempilo uma ubona ubuthakathaka, isiyezi, ngokuphuthumayo okuthile okudliwayo okumnandi, kodwa ngemali encane. Hlala imizuzu engu-10, futhi ungaphindaphindi umzamo wokudla ubisi.
Ukubuyekezwa kulabo abalahlekelwa isisindo ngesibisi
Ukubuyekezwa komdlandla we-isisindo sokulahlekelwa okungu-2 kg ngosuku ngokushintsha kweso ukunganeliseki, njengoba isimo sibhekene nama-95% samantombazane ekupheleni kosuku. Kusukela kulokhu siphetha ngokuthi: ukukhishwa ubisi kwesisindo, ukucwilisa umzimba. Cabanga ngesimo sempilo ngesikhathi sohudo olunzima, okufanayo kuzokwenzeka kuwe kusihlwa ngemuva kosuku olutshani itiye eliluhlaza nobisi. Asincoma i-molochai kunoma yiluphi uhlobo. Uma ufuna ukunciphisa umzimba ngokunambitheka ngaphandle kokulimala, qaphela ukudla " kwama- petals angu-7" .
Ezempilo - okokuqala!
Umlingo wemvelo: Izindlovu zomshado nezindwangu ezingavamile
Ziyini amabhulogi futhi zenziwa kanjani?
Ukubuyekeza kwefilimu "Abakwa-Scammers"
Ngilindele ingane, ukukhulelwa, amathiphu amaningana omama abalindele
Isitshalo seqanda othosiwe
Ukupheka kanjani iwundlu? Amathiphu ambalwa
Ukudla okungcono kakhulu kwamadoda
Yini ukupheka izingane etafuleni elihle lokuzalwa
I-Horoscope ngo-February 2018 - I-Cancer Yamantombazane - evela kuTamara Globa no-Angela Pearl
Imithi eyingozi: indlela yokuphathwa ngayo, hhayi ukugula